Golaha Wasiiradda oo Ansixiyay Hindise Sharciyeed, Warbixina ka dhagaystay Guddiga Doorashooyinka+Sawiro – Hornafrik Media Network
Golaha Wasiiradda oo Ansixiyay Hindise Sharciyeed, Warbixina ka dhagaystay Guddiga Doorashooyinka+Sawiro
By HornAfrik	 On Sep 14, 2017
Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka.
Kulankan ayaa looga hadlay Hindise Sharciyeedyo, Amniga Qaranka, Doorashooyinka 2020 iyo Arrimo kale.
Hay’adaha amniga ayaa ugu horreyntii laga dhageystay warbixinta amniga, iyagoo sheegay in kooxaha nabad-diidka ah oo diidan horumarka amniga dalka inay gobollada qaar qaraxyo ka geysteen oo shacab ay ku laayeen, iyadoo hay’adaha amnigu ay sheegeen inay sii labo jibaarayaan Hawlgaladooda ay ku soo celinayaan amniga iyo xasiloonida.
Wasaarada Gaashaandhiga ayaa sheegtay inay socoto qiimeyn lagu sameynayo diyaar garowga ciidanka XDS ee ku aadan sidii ay amniga dalka ula wareegi lahaayeen mustaqbalka dhow.
Golaha Wasiirada waxay ayaa warbixin ka dhageysteen Gudoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka, Xaliimo Yareey oo soo bandhigtay qorshaha guud ee doorashooyinka, si qoto-dheerna uga warbixisay horumarka ay ku tallaabsadeen ee ku aadan diyaargarowgooda, Waxayna sheegtay in Gudigooda ay ka go’an tahay in la gaarsiiyo Dalka Doorasho Qof iyo Cod ah.
Guddiga ayaa sheegay inay daraasad ku sameeyeen dalal badan oo duruufaha heysta ay la mid yihiin Soomaaliya haddana ay doorashooyin ka qabsoomeen. Waxayna Guddiga sheegeen inay jiraan caqabado fara badan, iyagoona ka codsaday in Golaha Wasiirada ay xal u helaan caqabadahaas oo ay ka mid yihiin tan dhaqaalaha, amniga iyo siyaasada oo muhiim u ah qabsoomida doorashooyinka.
Golaha Wasiirada ayaa Guddiga ku ammaanay dadaalkooda una ballanqaaday inay u fududeyn doonaan howlahooda si dalka looga hirgeliyo doorashooyin hal-qof iyo hal-cod ah 2020ka.
Ugu danbeyntii Golaha Wasiirada ayaa ka dooday hindise sharciyeedyo kale si looga soo baaraandago oo kulamada danbe loo ansixiyo. Sidoo kale Golaha Wasiirada ayaa dib u eegis ku sameeyey Xeer Hoosaadka Golaha Wasiirada, kuna ballamay inay ka soo baaraandegaan si loo ansixiyo kulamada dambe.
Xaliimo Yareey oo Warbixin siinaysa Golaha Wasiiradda.
Wasiiradda oo Warbixin dhagaysanaya.
Wasiirka Dastuurka oo Sawir isaga dhex qaadaya Shirka Golaha Wasiiradda.
Wasiiradda oo fadhiya Shirka Golaha Wasiiradda.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka tirsan AMISOM oo la geeyay Dhuusamareeb, Sababta,?